Glass ifayibha sheet ngakumbi uphahla nentlaka RY720-B - China Hubei Shengyu zokwakha
FOB Price: 5.65-9.99 / square metres
sheet kophahla resin eyenziweyo Shengyu, isale Geloy ASA resin, i co-extruded Iphepha ezizodwa kophahla 3 umaleko-. uphahla Traditional Tiles iphethini imibala isityebi slab ukukhanya Kulula ukufaka. It is a slab eyomeleleyo kunene, ukumelana nomoya kunye nesichotho, nazo zingasetyenziswa apho kufuneka into ephakamileyo esthetic. Yiyiphi eyona, kusahleli izinzile ngebala kunye neempawu zomzimba phantsi ultra-violet radiation, ngamathontsi, ubushushu, chillness kunye nempembelelo.
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm njengoko kuyimfuneko (elipheleleyo ezininzi ka 219) 6kg ± 0.1kg Matte okanye Iyanyinyitheka Blue, Bright Red, Grey, Deep Red, ubumba
Njengoko izinto umaleko phezulu, Geloy zobunjineli intlaka eyenziwe kaWonke linyuke ezifanele ukusetyenziswa yangaphandle. Nkqu baboniswa ultra-violet radiation, ngamathontsi, ubushushu, chillness kunye nefuthe, iimveliso ukuhlala uzinzo imibala kunye neempawu zomzimba. Iimvavanyo ebibanjelwe Ukwaluphala kwiziko Yovavanyo Arizona kunye Florida lwenu ngaphantsi kwe △ E-5 kwisithuba seminyaka eli-10.
Shengyu sheet zokwenziwa nentlaka uphahla inomthamo olomeleleyo ukuthwala enzima. Olu vavanyo, olwenziwe Shanghai Municipal Building Material Component Umgangatho Supervision and Station Test, ingqina ukuba akukho sihlwahlwaz zikwimeko we 660mm ekuxhaseni kweminwe kunye nomthwalo 150kg isicelo.
Enye iqhekeza eqhelekileyo oxwebhu kophahla 720mm inobunzima 5.9 ± 0.1kg.
Next: temperatuer High & sheet kophahla nokumelana
Ngeli kokuphatha, imveliso kufuneka elingayi kuchithwa ukuphepha umonakalo okanye ngokuqhwaya umphezulu imveliso. Kuba iphepha elinye ixesha elide ngaphezu 8m, iingongoma ngokwaneleyo abaxhasayo kubalulekile ukuba siphephe nokuqhekeka of ithayile.
Nceda ubuthe rubber ring manzi kulo gasket phambi ukulungisa izikrufu roof.The kufuneka ingafakwa tightly.Finally kakhulu tyhala isiciko manzi kwi ngezikhonkwane ngqongqo kakhulu.
ngezikhonkwane kufuneka esisigxina nkqo ukuya surface.Screws liphepha ubude 75mmand sangqa 6.3mm ziyafuneka ukulungisa ithayile engundoqo.
Resin sheet Shengyu esetyenziswa phezulu ephahleni ukusuka 20 ukuya 80.For langutela ngaphaya kolu luhlu, amanyathelo awodwa kufuneka kuthathwe ngexesha lofako.
1. Ubume ubuhle
The Umphezulu kumgangatho kufuneka zibe mpuluswa, nesixhobo kumgangatho kufuneka ibe deformation encinane, kumgangatho kufuneka ibe ngaphezulu kwe 12mm ubukhulu (ngokutsho kweminwe purlin).
A umsantsa 3-5mm phakathi ube ezimbini kubalulekile ukuba deformation.
Imiqulu manzi kufuneka avule kakuhle nkqo kunye seqela echanekileyo.
2. Ubume Steel
I-engile lwesakhiwo sentsimbi kufuneka kulawulwe ncam phakathi kwenqubo, nto leyo eya kuba nefuthe incochoyi yophahla. Nokuphambukiswa engile kuya kubangela ukuba uphahla olungalinganiyo.
Ali le yodidi kufuneka anti-umhlwa ngayo.
3. kwaqinisa wesakhiwo
Le underlay ngekonkriti akukho nempembelelo ebalulekileyo kwi evenness kwendlu, ngelixa ifaka olungisiweyo kunye purlins kufuneka kakuhle kakhulu kwaye moya.
Zombini ifaka zentsimbi kunye nemithi olungisiweyo kunye purlins kufuneka anti-umhlwa ngayo ukuba sandise ubomi kobume lophahla.
Purlins Steel kufuneka welding, ukuba izinto ezifakelwa yentsimbi olungisiweyo kunye purlins iinkuni ukuba wayebethelelwe iinkuni olungisiweyo ifaka ngqo.
Ingqalelo! Akukho tile kophahla bebenoyilungisa ngokupheleleyo ingxaki amanzi ngokwawo, ngokuba izindlu eqhelekileyo, kufuneka kubekho underne
1. Anti-umhlwa unyango: purlins Metal kufuneka isale enye inwebu ipeyinti anti-mhlwa kunye iileya ezimbini Ipeyinti nokuyifeza ngeninako. Purlins Wood kufuneka isale anti-umhlwa okanye oyile igada.
2. Le purlin ephezulu kufuneka 180mm umgama ukusuka kumgca Ridge le ukuze ufake tile ephakeme.
3. Le purlin Undoqo kufuneka umgama 50-70mm ukusuka eave.
4. Indawo purlin yi 660mm for Royal Tile.
Linear Ubushushu Ukwandiswa
Sheet resin kophahla Shengyu kukho ukungavumelani kwe yokwanda linear ka 0.0000493 / ℃ .Ukwenzela ukuvumela linear ukwanda okuqhelekileyo kwiphepha, sicebisa ukuba sizakugrumba umngxuma ububanzi 2-3mm inkulu ngaphezu koko kwezi esijijwayo, uze wenze ndilungiselela angaphindi dilatation le sheet.Please musa ukwenza entengo lanamathela kakhulu.
Ukufakelwa Of Tile Main
ulungelelwaniso Lungisa kubaluleke kakhulu ukuba kungakhathaliseki ukuba uhlobo lwesakhiwo yophahla, kuphela oku iimakhishithi ibandla kakhulu kwaye straightly Umgca nkqo kufuneka ibe 50 ~ 70mm ukuya ngaphakathi sidewall ukuba uphahla ezinophahla, kunye umgca 150mm tyaba ukuya purlin ezantsi .
Beka iphepha lokuqala kufutshane kangangoko kumgca zokwakha nkqo, ukulungisa phezu ithayile yokuqala ukrozo lwesibini nkqo, ngokutsho ezixhasa framework.The lukrozo lokuqala kufuneka naphantsi kweziphi na iimeko egqojozwe.
Fixings kufuneka ndawonye kwi yomtshangatshangiso isiqhova of ithayile.
ngokukhethekileyo kufuneka kuthathwe xa wokulungelelanisa lukrozo lokuqala ngokuba sheets elide nokuba i lunenwebu off of a milimitha ezimbalwa ukuba iphepha ngalinye linga ukudala iingxaki.
Emva koko dlulela ukwenza kwamanani yesibini, ayangenana iphepha yesibini yokuxazulula kwi kuqala alungise kunye ngezikhonkwane self kwi ithayile kuqala liphantsi okuhambelana ukudlulela.
Ukuze ugcine ulungelelwaniso ngokuchanekileyo fixings sincoma ukusetyenziswa kumgca reference zigxunyekwe egqithiseleyo umqadi.
Qhubeka ngendlela efanayo kunye neemakhishithi wesithathu naphambili, kwaye kwakhona khangela imeko sheets ezine, ngoko ndanyula zonke ezinye ithayile.
Hlanganisa iimakhishithi ngendlela efanayo kude kube wokugqibela enye, ukuba kuyimfuneko, ububanzi iphepha lokugqibela kusenokufuneka kunqunyulwa ngokufanelekileyo.
Ingqalelo! sheet ngamnye kufuneka ndawonye kufutshane kangangoko kule omnye wayesaphila.
Kuba ukrozo lwesibini sicebisa njengesiqhelo ukuba uqalise ukusuka ekhohlo kunye noxwebhu leyo wayaphula lengthways kwisiqingatha (imiqolo emithathu tiles) .Oku kukuvumela ukuba uqhubeke ukufana oxwesileyo lemiqolo uvalo, yaye njengoko enjalo uphephe crossover kweemakhishithi amane ezifanayo.
Ezi makhishithi ezishiyekileyo kunqunyulwa ekuqaleni ukuba kungachithwa njengoko enokuphenduleka ngexesha elinye ingasetyenziswa ekupheleni zokuxhoma njengoko uhlengahlengiso.
Gqibezela icala ngendlela efanayo.
Ivumelane imiqolo nkqo ye ithayile icala nezo yokuqala, ukuze ubuthe tile ephakeme.
Ingqalelo! Kuba yokuma esezantsi okanye ingakumbi ezinomoya okanye rainly imimandla kufanelekile ukuba kutywinwe ezifanayo ngu nentlaka sealant okanye lesilicon sealant.
Kuba kwicala unxantathu i yophahla kwithambeka ezine, iphepha lokuqala kufuneka ziqalwe kwi embindini, ke qhubeka zombini imiyalelo ekhohlo ne ekunene.
Sika iimakhishithi ecaleni komgca hip ukuba asesemble kummango oxwesileyo
Ukufakwa Ridge ithayile kufuneka iqale ukusuka kwenye side.For tile yokuqala, kufuneka isiqingatha itshone ukuphepha crossover kweemakhishithi ezine ezifanayo.
Self-ngezikhonkwane ngobude 75mm kunye sangqa 6.3mm kuya kufuneka ukuba ukulungisa kummango ithayile ukuya care engundoqo tile.Take ukuba ukulungisa kummango kufuphi ukuya kwikona kwaye ngoko ukuba iingxaki nokungena.
Njengoko ukufakelwa kummango oxwesileyo, kufuneka ilungelelaniswe ukugcina ngqo kunye hip line.Self-ngezikhonkwane ngobude 75mm kunye sangqa 6.3mm ziyafuneka ukulungisa imiphetho olwalusele main tile.Diagonal Ridge ithayile kufuneka ifakwe ukusuka ezantsi ukuya phezulu kunye ukungqubana 50mm.
A uqhagamshelo Indlela ezintathu-sisetyenziswa njengoko element wokujoyina phakathi kummango yomgama nalowo nemigca ukuba uphahla kwithambeka ezine.
Le ashishinayo wadala ngokujoyina phezulu ezimbini ziyahlangana sibizwa valley.Position ze alungise iziqwenga ezimbini ngaxeshanye 240 mm ukusuka embindini ashishinayo, zibhekisela Comer kule ntili.
Lungisa i emdaka entlanjeni eyenziweyo panel intlaka eyenziweyo okanye isinyithi kwiziqwengana usebenzisa self-ngezikhonkwane okanye izikhonkwane.
Isefu intlambo roll nazo zingasetyenziswa intlambo gutter.Position phezu kwikona ukuqala kumgca kummango le, ebeka phantsi ngobunono phezu slab.Begin ukulungisa udini egqithiseleyo entilini kwiziqwengana usebenzisa self-ngezikhonkwane okanye izikhonkwane.
Ezi makhishithi elihambisana umgca ntlambo kufuneka kwangaphambili ezimilise okwethangazana phambi ukubeka, kodwa eshiya ithuba kwakhona yokuxhoma kubo, emva ukulungisa, ukuba umgca intlambo ngokugqibeleleyo ngqo.
Connection Nge Wall
Sebenzisa sidewall zazo eyenziwe panel Shengyu resin okanye intsimbi, anamathele ibhodi ebengezelayo eludongeni kunye tiles yeyokuzingca ngezikhonkwane okanye iinzipho uyitywine ekupheleni ephezulu ezibengezelayo nge electronic sealant.
Udibaniso Nge iiglasi
Sebenzisa resin eyenziweyo okanye flashings yesinyithi, unamathele ibhodi ezidanyazayo eludongeni kunye tiles yeyokuzingca ngezikhonkwane okanye iinzipho uyitywine ekupheleni ephezulu ezibengezelayo kunye lesilicon sealant. (Jonga imizobo ngasentla)
Flashings ziyacetyiswa ukuba adluliselwa kwisayithi ibhodi metal, njengoko phezulu uphahla kunye nendawo iiglasi ezi eziguquguqukayo ukulungiselela amaphahla ezahlukeneyo.
Alumuniyam okanye Isefu rolls nazo zingasetyenziswa unxibelelwano phakathi eluphahleni chimney.Stick: imbokodo ukuya sheets zonke ngeenxa zonke chimney.Fix kwesinye isiphelo kwimiqulu ukuba itshimini yi iinzipho uze uyitywine ukuphela ephakamileyo.
Udibaniso Nge Imbobo
Iimakhishithi kufuneka ndawonye ngendlela eqhelekileyo de eduze kule mbobo.
Thatha imilinganiselo ngqo kule mbobo ithambekele, ukwenza indawo yokubeka ngqo kwi iphepha polisher ethambileyo okanye ephathekayo obhityileyo-Izinyo isarha.
Zinonxibelelwano i njengehenjisi esikhokeleyo udibaniso ephantsi kwimakhishithi magumbi ze ulubumbe izandla zenu, ukuba ilingane sheet kakuhle.
Emva koko, beka iphepha emise, kufaneleka kakuhle kwi ecaleni kunye uxhulumaniso aphezulu kunye ziyangenana ngokuyinxenye, kunye kwisiphelo eziqalelo oluphantsi le njengehenjisi phambili kwicala esezantsi kule mbobo.
Emva kokugqiba ukuhlanganisana kummango oxwesileyo, ufake yesiphelo oxwesileyo piece Ridge kwisiphelo emazantsi kummango oxwesileyo, aze alungise le kummango oxwesileyo yi rivet.
Roof Tile egobile
Egobile zophahla Sheet
Fibre rhanga-Sheet Roof
Umthambo Sheet uphahla
Fibreglass zophahla Materials
Fibreglass Imbobo Sheets
Fire nekudodobalisa Plastic Roof Sheet
Green Fibreglass zophahla
Long span zophahla Sheet
Modern Classical zophahla Tile
Multi Umbala PVC Roof Sheet
Plain Uhlobo Bamboo Roof Sheets
Garage Roof Sheets zeplastiki
Plastic PVC zophahla Sheet Ngokuba Shed
Roof Tile Purple
PVC Roof Sheet yabucala
PVC zophahla Sheet
PVC zophahla Tile
Ukhuseleko Rain zophahla Sheet
Roof Sheets Price ngamnye Sheet
Zophahla Sheet Price
Zophahla tile Sheets
ngaphaya zophahla Sheet
Wave zophahla tile Sheets
White Fibreglass Sheets
temperatuer High & umhlwa ukumelana uphahla ...